Tsy Nisaraka Tamin’ny Basiny Mihitsy Izy | Manova Olona ny Baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Batak (Toba) Bengali Boligara Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Efik Esan Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Galicienne Galoà Goujrati Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kabuverdianu Kachin Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Khakasse Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Lingala Litoanianina Luganda Luo Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Masedonianina Maya Mongol Myama Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Tena) Quiché Rarotonga Romanianina Rosianina Rômania (Vlax any Rosia) Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Shanghaï) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Talian Tamoul Tandroy Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Soedoà Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tongan Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Udmurt Umbundu Urhobo Valencienne Venda Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa tzeltal Éwé
Notantarain’i Annunziato Lugarà
FIAINANY TALOHA: JIOLAHY NAHERY SETRA
Teraka sy lehibe tany Roma aho. Betsaka ny nahantra teny amin’ny faritra nisy anay ary mafy ny fiainana. Mbola tsy nahita ny reniko mihitsy aho, nefa tsy dia nifandray tsara tamin’i Dada koa. Nianatra ny fanaon’ny jiolahim-boto mpirenireny aho rehefa nihalehibe.
Mbola tsy ampy folo taona akory aho dia efa nangalatra. Nanomboka nandositra niala tao an-trano aho tamin’izaho 12 taona. Matetika i Dada no naka ahy tany amin’ny polisy. Niady taman’olona foana aho, satria nahery setra sy romodromotra tamin’ity olona rehetra ity. Niala tanteraka tao an-trano aho tamin’izaho 14 taona. Lasa nifoka rongony aho ary nirenireny. Tsy nahita toerana hatoriana aho, ka matetika no namaky fiaran’olona ary vao nangiran-dratsy dia efa niala tao. Teny amin’ireny dobo misy rano mifantsitsitra ireny aho no nisasa.
Lasa tena nahay nangalatra aho. Nataoko daholo na ny nanao sinto-mahery na ny namaky trano tamin’ny alina. Nalaza ratsy aho ka tsy ela dia nisy andian-jiolahy nitaona ahy hiaraka taminy. Mba “niakatra grady” àry aho satria lasa namaky banky. Nahery setra be aho ka lasa to teny teo amin’ilay andian-jiolahy. Tsy nisaraka tamin’ny basiko mihitsy aho. Niondanako mihitsy aza ilay izy rehefa alina. Efa lasa fiainako ny hoe mahery setra, mifoka rongony, mangalatra, miteny ratsy, ary mijangajanga. Nataon’ny polisy haza lambo aho, ary voasambotra matetika. Imbetsaka aho no nigadra, ka laniko tany am-ponja ny androatokom-piainako.
Nandeha nitsidika an’ny nenifaranay aho, indray mandeha, rehefa nivoaka ny fonja. Tany vao fantatro fa hay lasa Vavolombelon’i Jehovah izy sy ny zanany mianadahy. Nasain’izy ireo nivory niaraka taminy, tany amin’ny Vavolombelon’i Jehovah, aho. Nandeha aho satria mba tiako ho fantatra hoe hoatran’ny ahoana ny any. Rehefa tonga tany aho, dia tsy nanaiky mihitsy raha tsy nipetraka teo akaikin’ny varavarana. Amin’izay aho mba afaka manara-maso an’izay miditra sy mivoaka eo. Ny basiko tamin’io tatỳ amiko ihany.
Nanova tanteraka ny fiainako iny fivoriana iny. Hoatran’ny tsy teto an-tany aho. Olona mahafinaritra be sy mitsikitsiky daholo no tany, ary nandray ahy tsara izy ireo. Mbola tadidiko foana ry zareo ilay tsara fanahy be tamiko, ary hitako hoe tsy nihatsaravelatsihy mihitsy. Mifanipaka hoatran’ny atsimo sy avaratra ny tany amin’io fivoriana io sy ny tany amin’ilay nisy ahy.
Nianatra Baiboly tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah aho. Vao mainka tsapako, rehefa nandeha ny fianarana, fa tena nila niova aho. Narahiko ilay toro lalana ao amin’ny Ohabolana 13:20 hoe: “Ho hendry izay miaraka amin’ny hendry, fa hahita loza kosa izay minamana amin’ny tsisy saina.” Tsy niaraka tamin’ilay andian-jiolahy intsony àry aho. Tsy mora aloha ilay izy, nefa vitako ihany noho ny fanampian’i Jehovah.
Tamin’izay aho vao nahavita nifehy tena hatramin’izay niainako
Niala tamin’ny zavatra nandoto ny vatako koa aho. Niezaka mafy aho ka nahavita tsy nifoka sigara sy rongony intsony. Notapahiko ilay voloko lava be, tsy nanao kavina intsony aho, ary tsy niteny ratsy intsony. Tamin’izay aho vao nahavita nifehy tena hatramin’izay niainako.
Tsy tiako mihitsy taloha izany mamaky teny sy mianatra izany, ka sahirana aho vao nahavita nifantoka rehefa nianatra Baiboly. Niezaka mafy anefa aho ka lasa tia an’i Jehovah tsikelikely. Tsapako fa nisy zavatra niova tato amiko. Nanomboka nanenjika ahy mantsy ny eritreritro. Matetika aho no kivy satria tsy nahazo antoka raha havelan’i Jehovah ny ratsy rehetra vitako. Tena nampahery ahy ny namaky ny tantaran’i Davida Mpanjaka, tamin’ireny fotoana ireny. Navelan’i Jehovah mantsy izy na dia nanao fahotana lehibe maro aza.—2 Samoela 11:1–12:13.
Tsy mora tamiko koa ny nitory isan-trano. (Matio 28:19, 20) Natahotra mantsy aho sao hifanena amin’ny olona novonoiko na nanaovako ny asa ratsiko. Tsy dia natahotra intsony anefa aho, tatỳ aoriana. Lasa tena tiako ny manampy olona hahalala ny momba an’ilay Raintsika any an-danitra, izay tsara fanahy sady tena mamela heloka.
Efa maty aho hoatr’izay raha tsy nahalala an’i Jehovah. Maro tamin’ny namako taloha no efa maty, ary ny hafa migadra. Izaho anefa tena sambatra sady manana fanantenana tsara momba ny hoavy. Efa mahay manetry tena sy mankatò ary mifehy ny hatezerako aho izao, ka lasa mahay mifandray amin’ny hafa. Sambatra koa aho manana vady tsara tarehy. Carmen no anarany ary faly erỳ izahay manampy ny hafa hianatra Baiboly.
Oay, saika hadinoko! Manana asa tsara koa aho izao. Mbola misy ifandraisany amin’ny banky ihany ilay izy, saingy tsy mamaky banky intsony fa manadio indray.
Fantaro ny valin’ireo fanontaniana momba ny fandaharam-pampianarana Baiboly maimaim-poana ataonay.
Hizara Hizara Tsy Nisaraka Tamin’ny Basiko Mihitsy Aho
Hafa Mihitsy Izao ny Fiheverako ny Olona
Mba Omeo Fiainana Milamina Aho, na dia Herintaona Fotsiny Aza!